Presidents Zuma, Mnangagwa meet in Pretoria | SAnews
President Mnangagwa will serve as interim president until August 2018 when Robert Mugabe’s term was set to expire. Thereafter, the people of Zimbabwe are set to elect their next leader.
Speaking to the media after their talks at Mahlamba Ndlopfu, President Zuma’s official residence in Pretoria, the two reflected on November’s developments in Zimbabwe which President Zuma said were handled with maturity.
“We are very grateful for that because in a number of countries if the army decides to stand up, they leave a trail of destruction generally, but in Zimbabwe, they were able to bring it under control,” said President Zuma.
President Mnangagwa’s visit to Pretoria comes just a day after his national address to a joint sitting of the National Assembly and Senate since becoming President where he voiced his government's commitment to building a democratic, united Zimbabwe.
South Africa and neighbouring Zimbabwe’s diplomatic relations are marked by the annual convening of the Bi-National Commission (BNC) signed in 2015 and co-chaired by the two Heads of State.